CRFAR-Formaprod: hitarina ny fiharian’ny tanora | NewsMada
CRFAR-Formaprod: hitarina ny fiharian’ny tanora
Par Taratra sur 14/10/2020
Vovonana manohana ny tanora hisehatra amin’ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono ny Filankevi-paritra misahana ny fanofanana ara-pambolena sy ny eny ambanivohitra eto Analamanga (CRFAR). Mikarakara fifaninanana mandrafitra tetikasa ity vovonana ity, ho an’ireo tanora nahazo fiofanana tao amin’ny Fandaharanasa fiofanana ho an’ny famokarana ara-pambolena (Formaprod), ny fiompiana, ny jono ary koa ny taozavatra. Miara-miombon’antoka amin’izy ireo koa ny faritra Analamanga.
Mizara telo ny fifaninanana. Voalohany, ho an’ny ireo nahazo kojakoja sy fitaovana nentin’ny tanora nanombohany ny fihariany. Faharoa, ireo tsy mbola nahazo tohana mihitsy, nefa efa manao ny asa fihariany. Fahatelo, ho an’ny mampiofana ny tanora, hanombanana ny fahombiazan’izy ireo tamin’ny fiofanana nomeny.
Voakasik’ity fifaninanana ity ireo tanora nahazo fiofanana sy ny mpampiofana, ny taona 2014 hatramin’ny 2019. Nisokatra, omaly, ny fifaninanana ary hifarana amin’ny 31 oktobra 2020.
Hahazo fitaovana avy amin’ny CRFAR ny telo voalohany mendrika isaky ireo sokajy telo ireo. Hanaterana ny antontan-taratasy fandraisana anjara eny amin’ny foibem-paritry ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono eny amin’ny distrika ato amin’ny faritra Analamanga, ny Foibe misahana ny raharaha ara-pambolena (CSA), ny Filankevitry ny fampidirana eo amin’ny tsenan’ny asa (CIP) isam-paritra, miampy ny foibem-paritry ny Formaprod sy ny CFAR Analamanga.